Hagaha Suuqgeynta Pinterest: Sida Loo Hormariyo Ganacsigaaga 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Hagaha Suuqgeynta Pinterest: Sida loo Hormariyo Ganacsigaaga 2021
Haddii aad maamusho ganacsi online ah, waxay u badan tahay inaad waqti badan ku bixiso suuqgeynta warbaahinta bulshada. Haddii aadan ku jirin Pinterest Qorshahaaga suuqgeyneed, waxaa laga yaabaa inaad weydo.
Pinterest waa goob muuqaal sare leh oo u shaqeysa sida mashiinka raadinta marka loo eego shabakada bulshada. Natiijo ahaan, waxaad gaari kartaa dhagaystayaal cusub, u wadi kartaa taraafikada goobtaada, oo aad geli kartaa falanqaynta faahfaahsan si ay kaaga caawiso inaad gaarto yoolalkaaga. Xitaa ka sii wanaagsan, Pinterest waa madal si fudud loo bilaabi karo.
Tilmaan-bixiyahan, waxaanu kaga hadli doonaa sababta aad u malaynayso waxaad rabtaa inaad ganacsigaaga ka hesho Pinterest. Markaa waxaanu wadaagi doonaa lix tillaabo oo kaa caawin doona inaad samaysato akoon, abuurto biinno la wadaagi karo, oo aad ku dhisto joogitaankaada goobtan. Aan ku bilowno istaraatiijiyadaada suuqgeynta Pinterest!
Maxay tahay sababta aad u rabto inaad u isticmaasho Pinterest si aad u horumariso ganacsigaaga
Pinterest waa wax aad uga badan baraha bulshada. Dhab ahaantii waa mashiinka raadinta muuqaal, kaas oo la socda faa'iidooyin gaar ah oo ganacsiyada. Mid ka mid ah, nuxurku aad ayuu uga dheer yahay aaladaha kale, taasoo la micno ah in biinankaagu ay sii wadi karaan inay kuu soo saaraan natiijooyin bilo kadib markaad dhejiso.
Wax kale oo ka dhigaya Pinterest soo jiidasho leh waa saldhigga isticmaalaha. Madashu waxay ku faantaa qiyaastii 459 million isticmaalayaasha bishiiba, kuwaas oo intooda badan waa dad waaweyn. Haddi kani yahay tiro dad ah oo aad jeclaan lahayd in aad bartilmaameedsato, way caqli badan tahay in aad ganacsigaga dhigto goobtan.
Ugu dambeyntii, 80% ee Pinners ka hel noocyo ama alaabooyin cusub Pinterest. Tani waxay ka dhigaysaa qalab aad u fiican oo aad naftaada geliso radar-ka dhagaystayaasha cusub.
Bulsho la hel oo ku kori ganacsigaaga DreamHost
Khubaradayadu waxay kaa caawin doonaan abuurista istaraatiijiyad awood leh oo warbaahinta bulshada ah waxayna sare u qaadaysaa fulintaada si aad diiradda u saarto socodsiinta ganacsigaaga.
Hagaha Suuqgeynta Pinterest: Sida Loo Hormariyo Ganacsigaaga 2021 (6 Tallaabo)
Hadda oo aad aragtay in Pinterest ay noqon karto mid qiimo leh oo ku kordhinaysa istaraatiijiyadaada suuq-geyneed, aan eegno lix tillaabo oo lagu bilaabo.
Tallaabada 1: Samee Koontada Ganacsiga Pinterest
Tallaabadaada ugu horreysa waxay noqon doontaa inaad dejiso akoon ganacsi Pinterest. Nooca akoontigani waxa uu kaga duwan yahay koontada gaarka ah dhowr siyaabood oo muhiim ah. Marka hore, waxaad awoodi doontaa inaad sheegato degelkaaga iyo aaladaha kale ee bulshada, markaa macluumaadkaaga astaanta ayaa ka muuqan doona Pinterest Pin kasta oo ay ku jiraan macluumaadkaaga.
Waxa kale oo aad awoodi doontaa inaad dhisto xayeysiis oo aad u isticmaasho biinankaaga organic si ay kaaga caawiyaan wadista taraafikada iyo beddelka Haddii aad rabto hagitaan dheeri ah, waxaad iska qori kartaa la-talin xayeysiis bilaash ah.
Ugu dambeyntii, akoon ganacsi ayaa ku siin doona inaad gasho falanqaynta faahfaahsan. Waxaad xogtan ka soo saari kartaa aragtiyo qiimo leh si aad u horumariso istaraatiijiyadaada Pinterest.
Si aad u dejiso akoonkaaga ganacsiga, u gudub Ganacsiga Pinterest oo guji bogga Saxiix badhanka. Marka hore, waxaa lagu waydiin doonaa inaad samaysato akoon ama aad gasho mid jira. Marka xigta, waxaa lagu keeni doonaa shaashaddan oo aad ka bilaabi karto dhisidda astaantaada.
Waxaad ku dari kartaa inta ugu badan ama ka yar macluumaadka sida aad rabto. Waxay u badan tahay inaad rabto inaad ku darto sawirka profile, iyo sidoo kale dhowr siyaabood oo ay macaamiishu ku soo gaaraan. Haddii aad leedahay meel muuqaal ah, waxaad sidoo kale ku dari kartaa macluumaadkaas. Xusuusnow inaad gujiso Save badhanka hoose ee shaashadda haddii aad wax cusub ka samayso.
Tallaabada 2: Samee biinanka caanka ah
Markaad haysato koontadaada ganacsiga Pinterest diyaar u ah inaad tagto, waa waqtigii la abuuri lahaa biinnada qaarkood. Kahor intaadan bilaabin, waxaad rabi doontaa inaad aqoonsato qaar ka mid ah isbeddellada caanka ah ee nichegaaga. Nasiib wanaag, Pinterest waxay ku siinaysaa dhowr qalab si aad tan u fuliso.
Marka hore, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto Pinterest Saadaasha. Warbixintan aadka u muuqata waxay ka kooban tahay talo ku saabsan mowduucyada dhawaanahan u socon doona meelo badan.
Waxa kale oo aad u soo koobin kartaa raadintaada qayb ama dhegaystayaal. Haddii kale, waxaad soo dejisan kartaa warbixinta qaab PDF ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad iska hubiso Isbeddellada Pinterest. Qalabkani waxa uu diiradda saarayaa wakhtigan xaadirka ah, marka waxaad u isticmaali kartaa inaad ogaato waxa hadda ku socda Pinterest qaybaha kala duwan.
Guji erey kasta oo muhiim ah si aad u aragto garaafka raadinta waqti ka dib. Waxa kale oo aad arki doontaa biinanka ugu caansan ereyga raadinta, iyo sidoo kale xulashada isbeddellada la xidhiidha.
Aaladahani waxay ku siinayaan aragtiyo awood leh oo kaa caawin kara inaad qorshayso waxa ku jira biinnadaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira qayb muuqaal ah oo xooggan oo aad rabto inaad maskaxda ku hayso.
Sida aan sheegnay, Pinterest waa goob muuqaal sare leh, marka waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in sawirada aad u isticmaalayso biinankaagu ay yihiin heer sare. Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad doorato sawirro tayo sare leh, laakiin waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad fiiro gaar ah u yeelato cabbirka.
Biinanka ugu fiican ayaa ka dheer inta ay ballaaran yihiin. Halka ay cabbirka sawirka ugu habboon waa 735 by 1102 pixels, waxaa aad muhiim u ah in aad ka digtoonaato saamiga dhinaca, kaas oo ah 2: 3. Tani waxay ka ilaalin doontaa sawirada biinnadaada in la gooyo quudinta isticmaalayaasha. Waxaad sidoo kale rabi doontaa ku dar qoraal alt biinankaada, si la mid ah sida aad u samayn lahayd boggaaga, si aad uga dhigto kuwo la heli karo.
Sida kanaalada kale ee warbaahinta bulshada, waxa fiican inaad biinankaga ku ilaaliso inay la socdaan bilicda summadaada. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto calaamad calaamadeysan sawiradaada ama aad u hoggaansanto qaab gaar ah marka aad abuurayso nuxur.
Waxaad ka dhigi kartaa xoogaa fudud inaad raacdo tilmaamahan adigoo isticmaalaya qalab la mid ah Canva.
Canva, waxaad heli doontaa qaabab kala duwan oo biinanka ah, markaa waxaad had iyo jeer yeelan doontaa cabbirada ugu habboon. Canva waxa kale oo ay ku siinaysaa qaar ka mid ah agabka wada shaqayneed ee xoogga badan haddii ay dhacdo in aad koox la shaqaynayso. Ugu dambeyntii, feature Kit Brand waxay kuu sahlaysaa inaad summadaada, midabbadaada, iyo xarfahaaga si joogto ah u ilaaliso dhammaan aaladahaaga warbaahinta bulshada.
Pinterest sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto video biinanka. Kuwani waxay si toos ah u ciyaaraan markay isticmaalayaashu ku dhex wareegayaan quudintooda, si ay uga mashquulaan biinanka kale.
Markaad abuureyso pin fiidiyoow ah, maskaxda ku hay in isticmaalayaashu aysan qasab ku yeelan doonin muggooda markay dhex wareegayaan bogga. Markaa ha ka baqin inaad qoraal badan ku darto, si aad u soo jiidato oo aad fariintaada u gudbiso.
Markaad abuurto biinno qurux badan, tallaabada xigta waa inaad hubiso in la helay. Si la mid ah sida aad u maarayn lahayd Dhiciyaan Search Engine (SEO) mareegahaaga, waxaad si aad ah ugu tiirsanaan doontaa ereyada muhiimka ah si aad ugu sareyso natiijooyinka raadinta. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto magacyadaada guddiga Pinterest iyo sharraxaadaha. Waxa kale oo aad ku dari kartaa ereyada muhiimka ah magacyada faylkaaga sawirka.
Talaabada 3: U wanaaji biinankaaga gaadiidka ugu badan
Ilaa hadda, waxaan ka wada hadalnay sida aad u isticmaali karto SEO si aad u hubiso in biinankaagu ay ka muuqdaan natiijooyinka raadinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xeelado kale oo aad isku dayi karto inaad ka caawiso dadka soo booqda website-kaaga.
Marka hore, maalmaha iyo wakhtiyada qaar ayaa ka fiican kuwa kale si aad u aragto biinankaaga. Markaad rabto inaad sameyso xoogaa tijaabo ah si aad u ogaato goorta ugu fiican macluumaadkaaga, CoSchedule la ogaaday in 8-11 pm, 2-4am, 2-4pm, iyo 1-3pm ay yihiin waqtiyada ugu fiican ee la soo dhejiyo. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad daabacdo macluumaadkaaga Jimcaha iyo Sabtida.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa dadka kale inay ku dhejiyaan macluumaadkaaga looxkooda si ay uga caawiyaan ballaadhinta gaadhistaada. Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo ku daraya badhanka Pinterest website-kaaga. The Fudud Bulsho wadaag Buttons plugin waxay awood kuu siinaysaa inaad tan si dhakhso leh u sameyso.
Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad ku darayso sawirada Pin-u qalma macluumaadkaaga oo aad si xeeladaysan ugu dhejiso dhammaan mareegahaaga. Halka ay u badan tahay in aad ku dari doonto a pin It badhanka leh astaanta wadaagga bulsheed, waxa jira meelo kale oo yar oo laga yaabo inaad rabto inaad mid yeelato.
Haddii aad leedahay baloog, waxaad isku dayi kartaa inaad hagaajiso sawirkaaga gaarka ah ee Pinterest si aad u hubiso inay u muuqato mid weyn marka la dhejiyo. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto in badhanka uu soo baxo marka isticmaaluhu dul heehaabayo sawiradaada ama walxaha kale ee la wadaagi karo ee boggaaga.
Haddii aad hayso warside iimayl ah, isku day inaad ku darto qaar ka mid ah biinnadaada. Isticmaal fursadan si aad u muujiso qaar ka mid ah waxyaabahaaga ugu fiican oo ku boorriya akhristayaasha inay soo booqdaan boggaaga Pinterest.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad isku daydo inaad isticmaasho Wicida Wicista Ficilka (CTA) si aad dadka ugu dhiirigeliso inay macluumaadkaaga ku dhejiyaan guddiyadooda. Sida ugu caansan Pin-ku, waxay u badan tahay inay ka soo muuqato natiijooyinka raadinta oo ay kaa caawiso xoojinta sumcaddaada khabiir, kaas oo sidoo kale kara kordhiya taraafikada goobtaada.
Ugu dambeyntii, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku xirto astaantaada Pinterest meelaha kale ee bulshada iyo mareegahaaga. Waxa aad taas samayn kartaa adiga oo dalbanaya akoonnadaada kale.
Laga bilaabo dejinta akoonkaaga Pinterest, dhagsii Claim ee menu ee dhanka bidix ee shaashadda. Waxaad heli doontaa fursad aad ku dalbato shabakadaada, Instagram, YouTube, Etsy, iyo dukaamada Shopify. Kaliya dhagsii Claim badhanka, gal akoonkaaga, oo sii Pinterest ogolaanshaha loo baahan yahay.
Hadda, biin kasta oo laga sameeyay aaladahaaga ku xiran adiga ayaa loo aaneynayaa adiga. Waxa kale oo aad heli doontaa credit wixii biin ah oo aad samaysay ka hor inta aanad xidhin xisaabaadka kale, laakiin tani waxay qaadan kartaa dhowr maalmood.
Talaabada 4: Dhis Xiriirada oo Kasbaso Taageerayaal
Sida aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, Pinterest waxay ku saabsan tahay dhisidda xiriirka taageerayaashaada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee tan lagu gaari karo waa adigoo si joogto ah oo joogto ah u dhejiya.
Si ka duwan qaar ka mid ah aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, dhajinta xad-dhaafku maaha wax walaac ah Pinterest. Si kastaba ha ahaatee, ma rabto inaad daabacdo qiimaha biinanka maalin dhan hal mar. Markaa taa beddelkeeda, kala bixi, adigoo maskaxda ku haya waqtiyada dhajinta ugu fiican.
Waxaad sidoo kale rabi doontaa inaad ku darto nuxurka isku dhafka ah ee istiraatiijiyadaada Pinterest. Ha ka baqin inaad wax badan ka haysato xisaabaadka kale haddii aad u malaynayso in taageerayaashaadu ay xiiso u yeelan doonaan. Bixinta qiimaha waxay lama huraan u tahay abuurista daacadnimada macaamiishaada.
Intaa waxaa dheer, xusuusnow inaad ka jawaabto faallooyin kasta oo ku yaal biinnadaada. Waxa kale oo aad kaga tagi kartaa saaxiibtinimada, faallooyinka waxtarka leh biinanka kuwa raacsan si ay uga caawiyaan dhisidda isku xirka.
Iyadoo la xidhiidhka dhagaystayaashaada ay muhiim tahay, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad la shaqeyso guddiyada caanka ah ee ka baxsan shabakadaada dhow. Xeeladdani waxay si gaar ah waxtar u yeelan kartaa haddii aad rabto la dhiso xidhiidho saameeyayaasha. Haddii aad go'aansato inaad sidan ku gaadho, waxaad samayn kartaa xoogaa cilmi baaris ah si aad u hubiso in abuurayaasha iyo nuxurkooduba ay la socdaan qiyamka summadaada.
Si aad u hesho loox caan ah oo ku yaal meeshaada, ku bilow inaad ku qorto kelmad muhim ah oo ku jirta bar raadinta. Si aad u soo koobto raadintaada loox, isticmaal liiska hoos-u-hoosaadka ee dhanka midig.
Markaad gujiso looxa, waxaad awoodi doontaa inaad aragto tirada raacayaasha. Haddii aad rabto inaad raacdo looxa, dhagsii saddexda dhibcood ee ku xiga magaca oo dooro Raac.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku casuunto dadka kale ku dheji sabuuradahaaga. Tani waxay ku dari kartaa xoogaa kala duwanaansho ah macluumaadkaaga. Si aad u abuurto guddi kooxeed, ku dhufo calaamadda plus ee hoos timaada magaca guddiga.
Waxaad awoodi doontaa inaad u dejiso oggolaanshaha la-hawlgalayaasheeda. Dooro inay bedeli karaan biinanka jira iyo inay ku dari karaan kooda.
Waxaad sidoo kale u oggolaan kartaa inay ku martiqaadaan kuwa kale guddiga.
Hadda, waxaad ka raadin kartaa la-hawlgalayaasheeda magac ahaan oo waxaad ku martiqaadi kartaa guddigaaga. Haddii kale, waxaad koobi kartaa xiriirka guddiga oo si toos ah ula wadaag iyaga.
Waxaad dadka ka heli kartaa Pinterest si la mid ah sidaad u hesho looxyada. Kadib markaad ku qorto magaca isticmaalaha sanduuqa raadinta, dooro Dadka laga bilaabo liiska hoos-hoosaadka.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la xiriirto dad aad horey u taqaanay, sida asxaabta iyo qoyska, iyo sidoo kale bloggers ama summada aad raacdo aaladaha kale. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh u dhisto soo-raac wanaagsan.
Relacionado: 7 tillaabo oo lagu garto dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee ganacsigaaga khadka ah
Talaabada 5: Horumarinta Summadaada
Marka ay timaado xayeysiinta summadaada Pinterest, Pins Rich waa mid ka mid ah qalabka ugu qiimaha badan ee aad gacanta ku hayso. Biinanka Taajiriinta ah waxaa ku jira macluumaad dheeri ah, waqtiga-dhabta ah iyo siyaabo badan oo dadka loogu hagayo mareegahaaga.
Biinanka hodanka ah ee alaabta muuji qiimaha iyo helitaanka alaabtaada wakhtiga dhabta ah. Marka dukaameeystayaasha ay taabta biinkaaga, waxaa si toos ah loo keenayaa mareegahaaga, halkaas oo ay ku dhammaystiri karaan iibsigooda.
Dhanka kale, Recipe biinanka qani ah waxa ku jiri kara qiimaynta, wakhtiga karinta, liiska maaddooyinka, iyo wixii macluumaad kale ah oo aad rabto in aad ku darto. Haddii aad wax ka beddesho habka loo kariyo degelkaaga, Rich Pin ee u dhigma ayaa si toos ah u cusboonaysiin doona.
Haddii aad tahay blogger, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso isticmaalka Maqaal qani ah biinanka, oo muujinaya ciwaanka, sharraxaadda biinanka, iyo qoraaga qoraalka. Sida Recipe Rich biinanka, nooca biinku si toos ah ayuu u cusboonaysiin doonaa markaad maqaalka tafatirto.
Xusuusnow inaad ku darto xiriiriye khuseeya mareegahaaga mid kasta oo ka mid ah biinnadaada. Sida macluumaadkaagu u socdo guud ahaan Pinterest, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in isticmaalayaashu ay si dhakhso ah u gaari karaan isha.
Inta aad rabto inaad kor u qaaddo alaabtaada iyo adeegyadaada, kuwa raacsan ayaa laga yaabaa inay caajisaan haddii taasi ay tahay waxa kaliya ee ay kaa arkaan. Waad isku dari kartaa waxyaabahaaga adiga oo si joogto ah uga soo jiidanaya ilo kale oo ku yaal meeshaada. Markaad raadinayso noocyo kale oo la raaco, waxaad sidoo kale badbaadin kartaa biinanka xiisaha leh a guddi qarsoodi ah in la wadaago hadhow.
Haddii aad blog ku leedahay degelkaaga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u abuurto guddi kuu gaar ah posts blog. Tani waxay si gaar ah u caawin doontaa kuwa kaa helaya Pinterest halkii ay ka ahaan lahaayeen mareegahaaga, maadaama ay si dhakhso ah u arki doonaan nooca macluumaadka aad daabacdo.
Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xoogaa fikir ah geliso sida aad u habaynayso looxyada boggaaga profile. Ku haysashada looxyadaada ugu firfircoon uguna caansan xagga sare waxay siin kartaa isticmaalaha Pinterest dareenka waxa sumaddaadu ku saabsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, u badbaadi qaar ka mid ah booskan qoraaladaada blogka iyo sidoo kale looxyada alaabta.
Ugu dambeyntii, waxaad ka faa'iideysan kartaa fasaxyada, sida aad uga faa'iideysan karto blogyada iyo waxyaabaha kale ee warbaahinta bulshada. Isku day inaad biinanka ku salaysan dhacdada diyaar u tahay ugu yaraan hal bil ka hor, si aadan u dareemi doonin inaad ku degdegtay inaad daabacdo macluumaadka daqiiqada ugu dambeysa. Sidan, marka isticmaalayaashu ay raadinayaan fikradaha hadiyadda kirismaska ​​ama cuntooyinka Thanksgiving ee Pinterest, macluumaadkaagu waxay u badan tahay inay ka soo muuqdaan quudintooda.
Relacionado: Facebook, Twitter, ama Pinterest? U dooro kanaalka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee ganacsigaaga
Tallaabada 6: La Soco Guushaada Pinterest Analytics
Markaad sameysato akoon ganacsi, waxaad heli doontaa Pinterest Analytics. Waxaad u baahan doontaa in habkan lagu habeeyo sida ugu dhaqsaha badan si aad u bilowdo ururinta xogta qiimaha leh, oo ay ku jiraan tirada dhagaystayaashaada iyo qiimaha gujisyada.
Markaad heli doonto macluumaadka qaar isla markaaba, si aad si buuxda uga faa'iidaysato, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato boggaga Laga bilaabo Hubka Ganacsiga, waxaad u socdaali kartaa Falanqaynta> Aragtida beddelka. Kadib dhagsii Codsiga domain badhanka, waxaa ku xiga Claim badhanka ku xiga Shabakadaha Internetka.
Waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka ah inaad sheegato iyada oo loo marayo HTML tag, faylka HTML, ama diiwaanka qoraalka. Ugu dambeyntii, geli URL-ka degelkaaga oo guji Hubi Badhanka.
Marka aad sheegato mareegtaada, waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku biirto Barnaamijka Ganacsiga La Xaqiijiyay. Waxaad yeelan doontaa calaamad muujinaysa astaantaada taasoo kaa caawin karta inaad abuurto kalsooni, iyo sidoo kale a Shop tab halkaas oo isticmaalayaasha Pinterest ay wax ka iibsan karaan iyaga oo aan tagin mareegahaaga.
Talooyin Suuqgeynta Dijital ah ee ku jira Sanduuqaaga
Haddii aad u baahan tahay caawimo abuurista biinno cusub, samaynta olole suuq-geyneed Twitter-ka, ama qorista barta blog-ka fayraska, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Hel Qaar ka mid ah Taageerayaasha Pinterest
In kasta oo fikirka ah ka-qaybgalka aaladaha kale ee warbaahinta bulshada laga yaabo inaysan ahayn mid soo jiidasho leh, faa'iidooyinka suurtagalka ah ee isticmaalka Pinterest waxay u badan tahay inay dadaalkaaga ka dhigi doonto mid qiimo leh. Mawduucyada raagay ee aadka u muuqda ayaa wax badan ka caawin kara faafinta ereyga ganacsigaaga.
Aan dib u soo koobno ​​tillaabooyinka aan wadaagnay si aan ganacsigaaga uga helno Pinterest:
Samee akoon ganacsi Pinterest
Samee biinanka caanka ah
U wanaaji biinankaaga socodka ugu badan.
Dhis cilaaqaadka oo kasbado taageerayaal.
Kor u qaad astaantaada.
Lasoco guushaada Pinterest Analytics
Ma u baahan tahay xoogaa caawimo ah istaraatiijiyadaada Pinterest? Waxaan kuu qaban karnaa suuqgeyn bulsheed adiga! Wax badan ka baro annaga adeegyada suuqgeynta warbaahinta bulshada iyo sida aan kuugu caawin karno kobcinta ganacsigaaga.
Sida loogu daro Shopify-Style Checkout Bogga WooCommerce